Akụkọ ihe mere eme - Teknụzụ nzacha
2002 Akụkọ anyị bidoro
Ahụmịhe anyị n'ịmepụta akụkụ plastik kpọgara anyị njem n'ime ọgwụgwọ mmiri gbara akwụkwọ. N'ịkwado azụmaahịa kachasị mkpa na nka nke ọma, anyị na -enye ndị ahịa imewe na imepụta katrij na ihe ndị ọzọ dị mkpa.
Mwepụ anyị na-eche ihe ịma aka ọhụrụ nke ahịa ụlọ ihu, emesịa anyị malitere ịgbanwe azụmaahịa anyị wee bute ụzọ nke mmepe onwe anyị dabere na afọ anyị nwere ahụmịhe ọrụaka.
Anyị na -ahazi nsogbu ụlọ ọrụ na ngwọta anyị wee malite ire uru karịa naanị ngwaahịa. Site na ịchọpụta isi ihe mgbu nke ụlọ ọrụ ahụ, anyị na -atụpụta echiche nke ngụkọta ngwọta maka mkpa mmiri gị niile n'ime ụlọ niile iji melite ogo mmiri ụlọ niile.
Njem Lean 2012 amalite
Ịmụta gbasara Sistemụ Production Toyota (TPS) agbaala anyị ume ime ihe na imeziwanye na nzukọ ya. Anyị na -etinye nghọta ya na TPS site na iji sistemụ arụmọrụ nke anyị, Runner Production System (RPS), iji melite arụmọrụ.
2016 Na Ịchụso Ọkacha mma
Na -agbasi mbọ ike inwe ọganiihu na ọrụ anyị, anyị na -ekwupụta mmezu na ịrụ ọrụ nke ụlọ nrụpụta ọhụrụ anyị nke pụrụ iche n'ịkpụpụta katrij nzacha.
Ntọala nke ụlọ nyocha nnwale mmiri n'ime ụlọ nke etinyere dịka ọkọlọtọ NSF si wee meziwanye nlekọta nlekọta, enwere ike ịme nyocha zuru oke na ahịrị ngwaahịa anyị zuru ezu ebe a.
Ọpụpụ Ọhụrụ 2017
Ntọala gọọmentị nke Xiamen Filter Tech Cooperation Industrial, dị ka obere ụlọ ọrụ nwere n'okpuru Runner Group, na-anya ikpo okwu mmiri nke Runner Group na ọkwa ọhụrụ.
"Obere ihe ka ukwuu", yana asụsụ pere mpe yana ahụmịhe onye ọrụ, anyị na -asọpụrụ ma nwee ekele ịnata iF DESIGN AWARD 2017 na ihe nhicha mmiri ọnwa.
2018 Nnukwu arụmọrụ ọzọ
Nhazi ergonomic zuru oke na -eweta ọmarịcha mara mma na enweghị atụ. Igwe mmiri PLANCK anyị emerila ihe nrite Red Star Design.
Nkwado mmekọrịta 2020 na Nsogbu
Anyị setịpụrụ onwe anyị ọrụ inye ihe na inye aka na ọha na obodo site na inye onyinye n'oge nsogbu ọgbaghara nke ntiwapụ COVID-19. Ihe ọ bụla anyị na -eme, anyị na -eme ya n'uche ọha mmadụ.
2021 Ibu oke nke onyinye
A kwanyere ugwu ugwu ịnata 3 iF DESIGN AWARDS 2021 ya na afụ, nsị na onye na -eme nsị nri n'ime mmadụ 3,692 sitere na mba 52.
Kpatụ sistemụ nzacha mmiri, Njikere nzacha, Mmiri na -asacha mmiri Maka mmiri siri ike, Sistemụ osmosis kacha mma, Ụlọ na -asachacha mmiri n'ụlọ, Nnọchi Ihe Njikere Njikere Mmiri,